कोरो’नाले नि’धन भएको भनिएका ब्यक्तिको आँ’खा छै’न, घाँ’टीमा पनि गहि’रो चो’ट ! – AB Sansar
September 22, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on कोरो’नाले नि’धन भएको भनिएका ब्यक्तिको आँ’खा छै’न, घाँ’टीमा पनि गहि’रो चो’ट !
काठमाडौ । केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा थप एक कै दीको कोरो’नाबाट नि’धन भएको छ । असोज ३ गते नि’धन भएका रुपन्देहीका ६३ वर्षीय पुरुषमा सोमबार साँझ को’रोना पुष्टि भएको का’रागार प्रमुख जेलर लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटाले बताए। उनको गत शनिबार वीर अस्पतालमा उपचारको क्रममा ज्या’न गएको थियो। नि’धन पछि गरिएको परीक्षणमा उनमा को’रोना देखिएको हो।
कर्तव्य ज्यान मु द्दामा जन्म कै दको जे ल सजाय का टि रहेका उनी मिर्गौला रोगी समेत रहेको बताइएको छ । उनलाई स्वासप्रस्वासमा समस्या देखिएपछि शनिबार वीर अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। त्यही दिन उनको नि’धन भएको थियो।उनका आफन्तले भने को’रोना र बिमारी नभइ अन्य कारणले नै ज्या’न गएको गुना’सो गरिरहेका छन्।
कोरोना पुष्टि भएको भन्दै आफुहरुलाई श’व नदेखाइएको भन्दै आफन्तले अस्पतालमै विरोध गरेका छन् । एक जना महिला आफन्तले आफु विरामी हो भनेर श’वको कपडा खोलेर हेर्दा श’वको दुईवटै आँखा नभएको र अनुहार र घाँ’टीमा गहिरो चो’ट देखेको बताएकी छन् ।
आफन्तहरुले श’वको पोष्ट’मार्टम गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । कोरो’नाको नाम दिएर उनको कसैले ज्या’न लिएको आफन्तको गुनासो छ । आफन्तसँग छलफल भइरहेको जेलर बाँस्कोटाले बताए। केन्द्रीय कारा’गारमा हालसम्म ६ जना को’रोना संक्र’मितको ज्या’न गएको छ ।
January 23, 2021 January 23, 2021 santosh
उच्च अदालतको फैसलाप्रति थरुहट मोर्चाद्वारा तीव्र असन्तुष्टि